अर्थतन्त्र खस्काउने सरकार, निलम्बनमा पर्ने गभर्नर – kalikadainik.com
शनिबार, चैत्र २६, २०७८ | ९:०६:०२ |
काठमाडौं । संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा उनलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (२) अनुसार नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। त्यही दफाको (४) मा भनिएको छ,
‘सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।’
अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई निलम्बन कानुनविपरीत भएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गलत समयमा भएको यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा
नकारात्मक असर गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। चुनाव लागिसकेको छ। बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ। यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ?’ उनले भने।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रलाई हेर्ने स्वायत्त संस्थालाई सरकारले यसरी चलाउनु गलत भएको बताए। ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष हेर्ने राष्ट्र बैंक हो। यसलाई अस्थिर बनाइयो। यसले राष्ट्रलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। नेपालले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला गभर्नर निलम्बन हुनुले वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने औंल्याए।
आयात प्रतिस्थापन नगरे बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : गभर्नर अधिकारी
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी निलम्बित
कमल थापा भन्छन् : गभर्नर निलम्बनको निर्णय निन्दनीय, तत्काल सच्याउ
आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बन गरे, देश श्रीलंकाको बाटोमा : एमाले
गभर्नर अधिकारी: श्रीलंका, टर्की, पाकिस्तानजस्ता मुलुक बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर आर्थिक संकट भोगिरहेका छन्। हामीले समयमै सतर्कता नअपनाएमा त्यही अवस्था आउन सक्छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ, बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएन भने तिनै मुलुक जस्तो हुन सक्छ।
अर्थमन्त्री शर्मा (झोक्किँदै): नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन। कहाँ हाम्रो त्यो अवस्थामा पुगेको छ र ? कतिपयलाई भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो बनाउने रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन। राष्ट्र बैंकसँग सूचना माग्यो सूचना दिँदैन तर बोर्ड सदस्यहरू नै नीति चुहावट गर्छन्।
मन्त्री र गभर्नरबीच शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनाभनै भयो, यसरी। गभर्नर अधिकारीले नेपालको आर्थिक संकट श्रीलंकाको जस्तो हुने अवस्था नजिक पुगेको संकेत गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा जंगिएका हुन्। तर उनले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको स्वीकार गरेका छन्।
‘हाम्रो ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायतालगायत तथ्यांक हेर्‍र्यौं भने श्रीलंकासँग तुलना नै हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलनै नहुने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुँदैन।’
अर्थमन्त्री शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। गभर्नर अधिकारी केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका हुन्। तीन नियमनकारी निकायबीच पछिल्लो समय राम्रो समन्वय छैन। स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री शर्मा त व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा नै पुगेका छन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल अर्थ मन्त्रालयले एकांकी ढंगले एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्‍याउँदै जाँदा अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ अघि बढिरहेको बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. खनालले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मिलेर ‘रेस्क्यु’ गर्नु पर्नेमा ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ। यस बेलामा एकीकृत ढंगबाट समन्वय गरेर संकटको उद्धार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो गाईजात्रा पो गरिरहेका छन्, यो सब स्वार्थ केन्द्रित भएर भएको हो। एकले अर्कालाई नटेर्ने, अहिले यो आम प्रवृत्तिगत कुराले संकट निम्तिँदै गएको छ।’ यो आम प्रवृत्तिगत विषय संकट श्रीलंका बनाउने दिशामा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकबीच मात्रै नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यो संकटपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्र, आम नागरिक आश्वस्त पार्दै जानुपर्छ। अर्को प्रकार जाँदा अझ संकट निम्तिने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने।
अर्थविद् डा.रामेश्वर खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिले संवेदनशील भएर नबोल्नु दुःखद् कुरा भएको बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या परेको बेलामा अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउने, गाली गर्ने, त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा नागरिक निराश हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘खासगरी बैंकिङलगायतका व्यावसायिक क्षेत्र सशंकित बन्छन्। यसो गर्न हुँदैनथियो।’ पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थतन्त्र संकटका बेला नियमनकारी निकायबीच विश्वास हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त हुन नदिने नियमनकारी निकायबीच समझदारी महत्त्वपूर्ण हो।’
अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न चाहे, सरकारले सुन्यो स्वार्थ समूहका कुरा
गभर्नरले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भनिदिए, चुनावको मुखमा सरकार त्यो देखाउन चाहन्न थियो
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । चुनाव लागिसकेको छ । बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ । यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ? – केशव आचार्य, अर्थशास्त्रीराष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष हेर्ने राष्ट्र बैंक हो। यसलाई अस्थिर बनाइयो। यसले राष्ट्रलाई
– डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नरअर्थ मन्त्रालयले एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ। यस्तो बेला गाईजात्रा पो गरिरहेका छन्।
– डा. डिल्लीराज खनाल, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोगअर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेलामा अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउने, गाली गर्ने, त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा आम नागरिक निराश हुन सक्छन्।
– डा.रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिवअर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त हुन नदिने नियमनकारी निकायबीच समझदारी नै महत्वपूर्ण कुरा हो।
कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिवयस्तो बेला राष्ट्र बैंकले एउटा कुरा सोच्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को कुरा सोच्ने गर्नु हुँदैन।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था : (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।